Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247990 times)
« Reply #680 on: November 24, 2011, 02:19:01 PM »
" ပြဿနာ "
အိပ်မပျော်သောရောဂါဖြင့် ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသည် ။ ၄င်းကို ဆရာဝန်က
လိုအပ်သည်များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် ။ စိုးရိမ်စရာ ဘာကိုမှ မတွေ့ သည်နှင့် ဆရာဝန်က ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား အိပ်ပျော်အောင် ကျနော် လုပ်ပေးမယ် .. ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကလဲ ကျနော့်ကို ကူဘို့ လိုတယ်
အဓိက ကတော့ ခင်ဗျား အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာ ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကို ခင်ဗျားနဲ့အတူ ယူမလာ
နဲ့ ...။ ဘေးဖယ်ထားလိုက် "
" ဆရာ့ အကြံကို ကျနော် လက်ခံချင်လိုက်တာ ဆရာရယ်.. ခက်တာက ကျနော့်မိန်းမက သူတစ်ယောက်
တည်း အိပ်ဘို့ငြင်းတယ် ခင်ဗျ "
« Reply #681 on: November 24, 2011, 02:23:40 PM »
" လူ ကောင်း "
စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကို လူနာက ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ..ကျနော့်ကို ကူပါဦး...။ ကျနော် လူတစ်ကိုယ်ထဲနဲ့သုံးစိတ်ကွဲနေသလား မသိဘူး..
စဉ်းစားတာ တစ်ခု ၊ ပြောတော့ တစ်မျိုး ၊ လုပ်တော့ တစ်ခြား ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ. "
" ဒါများ..အဆန်းလုပ်လို့.. မစိုးရိမ်နဲ့... ခင်ဗျား ဘာမျ မဖြစ်ဘူး ။ ဒါ ..လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ 
« Reply #682 on: November 24, 2011, 02:33:07 PM »
" ဆေး သစ် "
ဆေးရုံတွင် ဖြစ်သည် ။ ဆေးသစ်တစ်မျိုးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ဆရာဝန်များ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။
လူနာများကို ကြာရှည်စွာ ကုသခံယူနေသူ အုပ်စု နှင့် မကြာသေးမီကမှ ကုသမှု ခံယူသူ အုပ်စု ဟူ၍ အုပ်
စု နှစ်စု ခွဲလိုက်ပြီး ဆေး၏ အာနိသင် မည်သို့ရှိမည်နည်းဆိုသည်ကို လေ့လာကြမည် ဖြစ်သည် ။
နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် ဆရာဝန်ထံ လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ...ကျနော့်ကို နောက်ဆေးတစ်မျိုး ပြောင်းပေးတယ် ထင်တယ် "
ဆရာဝန်က သတိကြီးစွာထား၍ ပြန်မေးသည် ။
" ဆေးတစ်မျိုး ပြောင်းပေးတယ်လို့ခင်ဗျား ဘာကြောင့် ထင်ရတာလဲ ဗျ..ဟင် "
" ဒီလိုပါ... အရင်ပေးနေကျ ဆေးပြားတွေကို ကျနော် ရေဆွဲအိမ်သာထဲ ပစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ
ရေပေါ်မှာ ပေါ်နေတယ်..။ အခုဆေးပြားတွေ ကျတော့ ပစ်ချလိုက်တာနဲ့မြုတ်သွားတယ်လေ. "
« Reply #683 on: December 05, 2011, 10:01:39 AM »
" ကိုယ် တွေ့မို့ပါ "
မော်စကိုမြို့ လည် ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုတွင် ဆံပင်တိုတို ညှပ်ထားသော လူငယ်တစ်ယောက် ရပ်စောင့်နေသည် ။
ဆောင်းရာသီဖြစ်၍ အအေးဓါတ်မှာ လွန်ကဲလှသည် ။ ထိုနေ့ တွင် အနုတ် ဒီဂရီ ၂၅ နှင့် ၃၀ ( စင်တီဂရိတ် ) အထိ ရှိနေ
သည် ။ လူငယ်တွင် ဦးထုပ် မပါချေ..။ ဆောင်းဦးထုပ် အထူကြီးကိုဆောင်းထားသော လူကြီးတစ်ယောက်က ၄င်းကိုမေး
" ဘာလဲ...သေချင်လို့ လား.. "
" ဘာဖြစ်လို့သေရမှာလဲ "
လူငယ်က အံ့သြသံဖြင့် ပြန်မေးသည် ။
" ဒီလောက်အေးတဲ့ အချိန်မှာ မောင်ရင်..ဦးထုပ်မဆောင်းထားဘူး...၊ အဲ့ဒါ အအေးမိပြီး မနင်းဂျီးမြှေး ရောင်ရမ်းနာ
ရောဂါ ( MENINGITIS ) ရသွားနိုင်တယ်..၊အဲ့ဒီရောဂါဖြစ်ပြီ ဆိုလို့ ကတော့ သေရင်သေ.. မသေရင် တစ်သက်
လုံး..ရူးသလို ကြောင်သလို ဖြစ်တယ်... မယုံမရှိနဲ့ ...ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးလို့ပြောပြတာ... "
« Reply #684 on: December 05, 2011, 10:10:29 AM »
" ကောင်း ကောင်း သိ တာ ပေါ့ "
" လူသုံးရာမှာ တစ်ယောက်ဟာ အရပ် ခြောက်ပေခွဲ ရှိတဲ့လူ..ဖြစ်လေ့ရှိတယ်တဲ့..
အဲ့ဒါ ခင်ဗျားသိလား.. "
" ကျနော်..ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့.. ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တိုင်း ကျနော့်ရှေ့ က
ခုံမှာ သူထိုင်တယ်လေ.. "
" မ မှား နိုင် တော့ ဘူး "
" သွားကိုက်နေတာလား.. "
" ဟုတ်တယ်.. တစ်ညလုံး အိပ်မရဘူး.. "
" အဲ့ဒါဆို ဆရာဝန်ဆီ သွားပြလေ.. "
" သွားပြီးပြီ.. "
" ဘာလဲ...မသက်သာဘူးလား. "
" ဆရာဝန်က သွားနှုတ်ပေးပါရဲ့..၊ ဒါပေမဲ့ မှားပြီး တခြားတစ်ချောင်းကို နှုတ်လိုက်တယ်
အခု...သူ့ ဆီသွားမလို့ဒီတစ်ခါတော့ နာတဲ့သွားကို နှုတ်ပစေပေါ့ "
" ဒီတစ်ခါလည်း မှားမှာ မကြောက်ဘူးလား.. "
" ဒီတစ်ခါ သူ မှားစရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး.. "
" ကျနော့်ဆီမှာ သွားတစ်ချောင်းပဲ ကျန်တော့တယ်လေ. "
« Reply #685 on: December 06, 2011, 09:36:40 AM »
" နား မ ထောင် လေ ကောင်း လေ "
" ခင်ဗျား ယောင်္ကျားဟာ လုံးဝ စိတ်လှုပ်ရှားလို့မဖြစ်ဘူး...
သူ့ ကို လုံးဝ အနားယူပါစေ "
" အိုး..ဒေါက်တာရယ်.. သူက ကျမ စကားကို နားမထောင်ဘူးရှင့် "
" ကောင်းတယ်....အဲ့ဒါ..အင်မတန်ကောင်းတယ်.. "
" နှ မြော တယ်. "
" ဆာရာ " က ရှိုက်ကြီးတစ်ငင် ငိုရင်း ပြောသည် ။
" အာဗရမ်... ရှင်မို့ လို့ကုလားထိုင် အသစ်ကို ချိုးရက်တယ်..
မီးဆိုင်းအသစ်ကို ဖျက်ဆီးရက်တယ်..။ ကျမတော့ ရင်ကျိုးပါပြီ..
ကြိုးဆွဲချ သတ်သေတာများ တခြားမှာ သွားလုပ်ပါလားတော့...
« Reply #686 on: December 06, 2011, 03:58:51 PM »
" တိုး လာ တဲ့ လျှော် ကြေး "
ဆိုဗီယက်ခေတ်က ဖြစ်သည် ။ အီဗန် သည် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရပြီး အလုပ်ဝင်လုပ်သည် . ။ ထိုစဉ်က သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း
ကျန်ဘွဲ့ ရများနည်းတူ လစာ ရူဘယ် ၁၂၀ ရသည် ။ မကြာမီ မိန်းမယူချင်စိတ် ၀င်လာသည် ။ သို့ သော် မိန်းမရလျှင် ရသမျှလခ
ကို မိန်းမလက်ထဲ အပ်ရမည်ကို စိုးနေပြန်သည် ။ သူငယ်ချင်းတွေ နှင့် ဘီယာစုသောက်ချင်သေးသည် ။ အမြဲတမ်း မိန်းမဆီကလက်
ဖြန့်မတောင်းချင်...။ သို့ နှင့် မိန်းမ ယူပြီး ပထမလခကို အပ်သည့်နေ့ မှာပင် မိန်းမကို ဤသို့ပြောသည် ။
" ငါ...တပ်မတော်မှာ စစ်မှုထမ်းတုန်းက ငါ့ကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပျက်ကျသွားဖူးတယ်..။ အဲ့ဒီအတွက် စစ်ရုံးက ငါ့ရဲ့ 
လခထဲက ရူဘယ် ၂၀ ကို လစဉ် ဖြတ်တယ်ကွ.. "
မိန်းမဖြစ်သူမှာ အသိစိတ်ရှီသူဖြစ်၍ ယောင်္ကျားကို နားလည်ပေးသည် ။ အမိနိုင်ငံတော်အတွက် ပေးရသည်ဖြစ်၍ ကျေနပ်သည် ။
ဤအတိုင်းနေလာကြသည်မှာ ဆယ်နှစ်ကြာသွားသည် ။ သားသမီး နှစ်ယောက် ရလာသည် ။ စားရိတ်စားကတွေ တိုးလာသည် ။ မိန်း
မဖြစ်သူ မကျေမနပ် ဖြစ်စ ပြုလာသည် ။ တစ်နေ့ တွင် ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" ဘယ့်နှယ့်တော်....လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က အမှားတစ်ခု လုပ်မိတာကြောင့်နဲ့အခုအထိ တစ်လကို ရူဘယ် ၂၀ ဖြတ်သတဲ့..
မကြားဖူးပေါင်တော်....။ ရှင် နဲ့ကျမ စစ်ရုံးကို သွားပြီး အရေးဆိုမှ ဖြစ်မယ်...။ ကိုင်း...လာသွားကြမယ်..။ "
အီဗန် အကြပ်ရိုက်သွားသည် ။ တစ်ချိန်လုံး မိသားစုကို လိမ်လာခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံရမှာ ရှက်သည် ။ ဘာ ဆင်ခြေကိုမှ တွေးလို့ မရသည်
နှင့် စစ်ရုံးရောက်မှ မီးစင်ကြည့် ကရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ စစ်ရုံးမှ အရာရှိကြီး၏ အခန်းထဲသို့နှစ်ယောက်သား ၀င်သွားကြသည် ။ မိန်းမ
က လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသည် ။ အရာရှိသည် အကင်းပါးသူဖြစ်၍ အခြေအနေကို သဘောပေါက်လိုက်သည် ။ အစအဆုံးနား
ထောင်ပြီးသောအခါ အမျိုးသမီးကို ပြောသည် ။
" ကိုင်း...ခင်ဗျား..အခန်းအပြင်ဘက်မှာ ခဏစောင့်နေပါ..။ ကျနော်တို့ဒီပြဿနာကို ရှင်းပါ့မယ် "
အမျိုးသမီး ထွက်သွားသည် နှင့် အရာရှီကြီးသည် ထိုင်နေမှ ထပြီး ဒေါသတကြီးနှင့် အီဗန်ကို အော်သည် ။
" အင်မတန် အောက်တန်းကျတဲ့ ကောင်ပါလားကွ..ဟေ...။ မိသားစုဆီက ဖြတ်စားရသတဲ့..၊ မင်းဟာ ကလေးနှစ်ယောက် အဖေဆိုတာ
မေ့နေသလားကွ....။ ငါ့ကိုကြည့်... ရေငုတ်သင်္ဘောအတွက် တစ်လကို ဆယ်ရူဘယ်ပဲ လျှော်ကြေး ပေးရတယ်.။ မင်းက ရဟတ်ယာဉ်
အတွက် ရူဘယ် ၂၀ တောင်.....ဘယ်မှာကြားဖူးသလဲ.. "
ထို့ နောက် အနည်းငယ် စိတ်ပြေသွားသောအခါ ဆက်ပြောသည် ။
" ထားတော့...ယောင်္ကျားချင်း မင်းကို ငါ နားလည်ပေးချင်တယ်..။ ကိုင်း..ဒီလိုလုပ်ကြမယ်..။ အခု အမိန့် စာတစ်စောင် ရေးပေးလိုက်မယ်
မင်းရဲ့မိန်းမအတွက်နော်...။ အခုအချိန်ကစပြီး လျှော်ကြေး တစ်လကို ဆယ်ရူဘယ်ပဲ ပေးတော့...။ လောက်အောင်သုံး...ဒါပဲ "
အမိန့် စာကို ကိုင်ပြီး ညှိုးငယ်သော မျက်နှာဖြင့် အီဗန် အခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာသည် ။ မိန်းမဖြစ်သူက မျှော်လင့်သော မျက်လုံးများဖြင့်
ယောင်္ကျားကို သိလိုစိတ် ပြင်းပြစွာမေးသည် ။
" ဘာတဲ့လဲ.. "
စာရွက်ကို စိတ်တိုတိုဖြင့် ထောင်ပြလိုက်ပြီး အီဗန် ပြောသည် ။
" မင်းမိုက်ပြစ်နဲ့မင်းပဲ ဟေ့....နောက်ထပ် ဆယ်ရူဘယ် တိုးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. "
« Reply #687 on: December 07, 2011, 11:10:48 AM »
" ကူ ညီ တာ ပါ "
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ရထားတစ်စီးပေါ်တွင် ဖြစ်သည် ။ လက်မှတ်စစ်က လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီး ခရီးသည်ကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား....လီကာတို မှာ ဆင်းမလို့ လား "
" အဲ့ဒါဆိုရင်...၁၀း၄၅ နာရီမှာ ထွက်တဲ့ ရထားကို စီးသင့်တယ်..၊ အခု ရထားကို မစီးသင့်ဘူး.။ ဒီရထားက
လီကာတို မှာ မရပ်တာ နှစ်လရှိပြီ. ဗျ.. "
" ဟာ...ဒုက္ခပါပဲ...၊ ကျနော် လီကာတို မှာ မဆင်းလို့မဖြစ်ဘူး..၊ ကျနော့် ကောင်မလေး..ကျနော့်ကို စောင့်
နေမှာဗျ...။ ကျနော် မဆင်းရင် ကျနော် သူ့ ကိုလိမ်တယ်လို့ထင်ပြီး.တစ်သက်လုံး.မုန်းသွားတော့မှာ ဗျ..။ ကျ
နော့်ချစ်သူနဲ့ကျနော် ကွဲပါပြီ..ဗျာ... "
လက်မှတ်စစ်က လူငယ်ကို သနားသွားသည် ။
" နေဦး...ကျနော် စက်ခေါင်း မောင်းတဲ့လူကို သွား ပြောကြည့်ဦးမယ်.. "
မကြာခင် ပြန်လာသည် ။
" စက်ခေါင်းမောင်းတဲ့သူက ရပ်ပေးလို့ မရဘူးတဲ့ဗျာ...၊ အဲ...ဒါပေမဲ့ လီကာတို ဘူတာအ၀င်မှာ တစ်နာရီ..၂၀ ကီလို
မီတာနှုန်းနဲ့ရထားကို အရှိ်န်လျှော့ပြီး မောင်းပေးမယ် တဲ့..။ ဒီ့ထက် ပိုနှေးလို့ တော့ မရဘူးတဲ့ဗျ..။ ...ဒီလိုလုပ်ဗျာ..
ကျနော်...ခင်ဗျားကို ကူမယ်..။ ဘူတာအနားကို ရောက်တဲ့အခါ..ခင်ဗျားကို ကျနော် ကိုင်ထားမယ်. .။ ခြေထောက်
နှစ်ဖက်နဲ့ခင်ဗျားက ပြေးသလို လုပ်... ။ အဲ့ဒီ့နောက် ပလက်ဖောင်းကို ရောက်တာနဲ့ခင်ဗျားကို ကျနော် လွှတ်
ပေးလိုက်မယ်. .။ ပထမ စက္ကန့် အနည်းငယ်မှာ ခင်ဗျား..အမြန် ပြေးဘို့လိုတယ်... ။ နို့ မဟုတ်ရင် လဲကျသွားနိုင်
ဤအစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ကြသည် ။ ပလက်ဖောင်းတွင် လက်မှတ်စစ်က လွှတ်ချပေးလိုက်သည်နှင့် လူငယ်သည်
ပထမ တစ်ရှိန်ထိုး ပြေးသည် ။ ထို့ နောက် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်လျှော့၍ ပြေးသည် ။ ဤတွင် မမျှော်လင့်တာ ဖြစ်လာသည် ။
နောက်ဆုံးတွဲတွင် လိုက်ပါလာသော ခရီးသည် တစ်ဦးက ပလက်ဖောင်းအတိုင်း ပြေးလိုက်နေသော လူငယ်ကို ဂုတ်မှ ကိုင်ပြီး
မိမိ၏ တွဲပေါ် ဆွဲတင်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် နှုတ်မှလည်း ပြောသည် ။
" ကိုယ့်လူ ကံကောင်းတယ်မှတ်.....ဒီဘူတာမှာ ရထားမရပ်တာ...နှစ်လတောင် ရှိပြီ... "
« Reply #688 on: December 07, 2011, 12:14:42 PM »
" လှောင် တယ် ထင် လို့"
ဆေးရုံပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ။ လူနာများအခန်းသို့သူနာပြု ဆရာမ နှင့် အတူ ဆရာဝန် ၀င်လာသည် ။
ဆရာဝန်က သူနာပြု ဆရာမကို မေးသည် ။
" ဒီလူနာတွေ ဘယ်သူတွေလဲ.... ဘယ်က ရောက်လာကြတာလဲ "
သူနာပြု ဆရာမက ရှင်းပြသည် ။
" လက်ကျိုးနေတဲ့လူက မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာ... ခေါင်းကွဲနေတဲ့လူက ဆောက်လုပ်ရေး
စခန်းကနေ ဒီကို တိုက်ရိုက်ခေါ်လာရတာ "
" ဟိုထောင့်က တစ်မျက်နှာလုံး ညိုမဲနေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လူကရော.. "
" ဘယ်ကမှ မဟုတ်ဘူး....သူ့ ဟာသူ ရောက်လာတာ.. "
" သူဘယ်သူလဲ...ဘာလုပ်သလဲ.. "
" ခေါင်းဖြီးတဲ့ ဘီးမျိုးစုံကို လိုက်ကြော်ငြာတဲ့ လူလေ. "
" ဘယ်လိုလုပ် ဒီဒဏ်ရာတွေ ရတာလဲ.. "
" ကျမတို့ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ထိပ်ပြောင်နေတယ် မဟုတ်လား...ပြီးတော့ မနေ့ က ဘာကြောင့်မှန်း
မသိဘူး... သူ့ အလိုလိုနေရင်း.. စိတ်တိုနေတယ်လေ.. "
« Reply #689 on: December 08, 2011, 09:42:16 AM »
" ရှေ့နေ ကြီး "
အောင်မြင်မှု အရဆုံးဟု အများက သတ်မှတ်ထားသည့် ရှေ့ နေကြီးသည် ယခုအချိန်အထိ အလှူငွေ တစ်ပြား
တစ်ချပ်မှ ထည့်ဝင်ခြင်း မပြုသေးကြောင်း သတိထားမိသော ပရဟိတ အသင်းတစ်ခုသည် မိမိ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်
ဦးကို ရှေ့ နေကြီး၏အိမ်သို့ စေလွှတ်လိုက်သည် ။ ရောက်သည်နှင့် အသင်းကိုယ်စားလှယ်က စကားစသည် ။
" လူကြီးမင်းဟာ ဒီမြို့ မှာ အောင်မြင်မှု အရဆုံး ရှေ့ နေကြီးပါ..။ လူကြီးမင်းဟာ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်မယ်လို့ 
ထင်ပါတယ်..။ ကျနော်တို့ အသင်းအတွက် အလှူငွေ မထည့်နိုင်ဘူးလား ခင်ဗျာ "
ရှေ့ နေကြီး ပြန်ပြောသည် ။
" ကျနော့်အမေဟာ နာတာရှည် ရောဂါနဲ့ဝေဒနာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားပြီး မနက်ဖန် သဘက် သေတော့မယ်
ဆိုတာ ခင်ဗျား သိသလား..။ ကုသစားရိတ် သောက်သောက်လဲ ကုန်ကျလို့အခု ကျနော့်အမေ မွဲနေပြီ ဆိုတာ
ကော...ခင်ဗျား သိလား.. "
ကိုယ်စားလှယ်သည် မျက်နှာ ပျက်ပျက်နှင့် ရှေ့ နေကြီးကို တောင်းပန်သည် ။
" ကျနော်....တောင်းပန်ပါတယ်.. ကျနော် ..ဒါတွေကို ..ဘာမှ မသိပါဘူး... "
ရှေ့ နေကြီး ဆက်ပြောသည် ။
" စစ်ပြန်ဖြစ်တဲ့..ကျနော့် ညီလေးဟာ မျက်လုံးကန်းနေတယ်..။ အိပ်ရာထဲက မထနိုင်ဘူး....။ သူ့ မိန်းမမှာ ကလေး
ခြောက်ယောက်နဲ့...။ အဲ့ဒါကော ခင်ဗျားသိလား.. "
" ကျနော်..အထူး..တောင်း..တောင်းပန်ပါတယ်..။ ဒါတွေကို ကျ..ကျနော် ဘာမှ မသိပါဘူး.. "
အသံမြှင့်ပြီး ရှေ့ နေကြီး ဆက်ပြောသည် ။
" ကျနော့် ညီမလေးရဲ့ ယောင်္ကျားဟာ ကားတိုက်ပြီးသေသွားတယ်..။ ကျနော့် ညီမဟာ အကြွေးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်း
ပြီး ကလေး သုံးယောက်နဲ့ကျန်ခဲတယ် ဆိုတာကော ခင်ဗျား သိသလားဟင်... "
" ဘုရား...ဘုရား.. သနားစရာပါလား ခင်ဗျာ... "
ရှေ့ နေကြီး စကားကို အဆုံးသတ်သည် ။
" အေး.....အဲ့ဒါတောင်မှ သူတို့ ကို အခုအချိန်အထိ ကျုပ် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မပေးခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့ ကိုတော့ ကျနော်
ပေးမှာပဲလို့ဘာဖြစ်လို့ထင်ရတာလဲဗျ... ဟင် "
မှတ်ချက်...။ ကျနော် မဟုတ်ပါ...။